Global Voices teny Malagasy » Miditra Amin’ny Dingana Farany ny Hazakazaka Ifaninanana Fatratra ho Filoham-Pirenena Gambiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Desambra 2016 4:22 GMT 1	 · Mpanoratra Demba Kandeh Nandika Naomy
Sokajy: Afrika Mainty, Gambia, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Nandritra ny ankatoky ny fifidianana, nisy ny fihetsiketsehana ara-politika manohitra ny governemanta  [mg] indrindra fa ao amin'ny faritra lehibe ao Banjul. Ao anatin'ny hetsika iray mitaky fanitsiana ny lalam-pifidianana sy ny fialan'ny filoha Jammeh ireo fihetsiketseham-panoherana ireo. Notsenain'ny bala tena izy [mg] avy amin'ny mpitandro ny filaminana ireo mpanao fihetsiketsehana.
Tamin'ny fiandohan'ny volana novambra, namoaka  tatitra ny Human Rights Watch, “More Fear Than Fair: Gambia’s 2016 Presidential Election ,” [Tahotra no betsaka kokoa noho ny Marina amin'ny fifidianana ho filoham-pirenen'i Gambia 2016] manoritsoritra ny fangejan'ny governemanta ireo antoko politikan'ny fanoherana tao anatin'ny volana maromaro nialoha ny fifidianana.
Tamin'ny fanadihadiana isan-taona ny firenen-drehetra niresahana an'i Gambia tamin'ny taona 2014 ny Amnesty International, fikambanana iray mpandala ny zon'olombelona no nilaza:  “Hatramin'ny namoahana ny fanadihadiana isan-taona nilazana an'i Gambia tamin'ny taona 2010 no niharatsy toerana ny zon'olombelona. Manohy amin'ny fanampenam-bava ny fahalalahana hiteny sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona hafa tsy voasazy ny governemanta.”
Ary tamin'izany fotoana izany i Bakary Badjie, mpanohana ny vondrom-panoherana nanoratra  tao amin'ny Facebook:
Vao haingana ny filoha Jammeh no nilaza  fa Andriamanitra (Allah) irery ihany no afa-manaisotra azy eo amin'ny fahefana satria izy ihany no nametraka azy teo. notoherin'ny filoha Jammeh ny fetran'ny fehim-potoan'ny filoha. Mihevitra izy fa Andriamanitra no mametra ny fehim-potoam-piasana ary raha sitrak'Andriamanitra dia mety ho afa-mitondra an'i Gambia ao anatin'ny “iray miliara taona”  izy. I Gambia no iray amin'ny firenena roa ao Afrika Andrefana manana filoha miasa ivelan'ny fehim-potoam-piasany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/12/02/92747/
 fihetsiketsehana ara-politika manohitra ny governemanta: https://mg.globalvoices.org/2016/05/07/82307/
 Notsenain'ny bala tena izy : https://mg.globalvoices.org/2016/05/14/82409/
 More Fear Than Fair: Gambia’s 2016 Presidential Election: https://www.hrw.org/node/295859/
 Andriamanitra no mametra ny fehim-potoam-piasana : https://globalvoices.org/2015/06/25/god-sets-term-limits-not-the-constitution-says-longtime-gambian-president-jammeh/
 “iray miliara taona”: http://www.bbc.com/news/world-africa-16148458